Tilmaamaha lagu galayo qandaraaska iibka | Ragga Stylish
Haddii aad samaynaysid qandaraas iib ah oo aad ku iibinayso ama ku iibsanayso baabuur ama guri, waa inaad taxaddar yeelataa. Ku saabsan yahay nooc ka mid ah ganacsiga tooska ah, iyo khataraha khiyaanada ayaa aad u sarreeya.
Su'aalaha la tixgelinayo waa kuwo aasaasi ah waxayna ku saleysan yihiin in la hubiyo in habraaca lagu daboolay xeerarka sharciga. Sidoo kale, iska ilaali inaad siiso faa'iidooyin badan ganacsatada aan la aqoon.
1 Iska jir khayaanada
2 Muxuu yahay qandaraaska iibku?
3 Noocyada khayaanada qaarkood
Iska jir khayaanada
Khiyaanooyinku waa xaqiiqo maalinle ah. Xitaa haddii aad aqriso heshiiska ama qandaraaska kor ku xusan oo aad mooddo inay wax walba hagaagsan yihiin, ma dhici karto inay sidaas tahay. Mararka qaar, khayaanada ayaa ku jirta qodobo ka mid ah qandaraaska oo aadan waligaa ka fikiri doonin.
Waa, sidaa darteed, tixgeli dammaanad kala duwan ee ilaalinta danahaaga.
Muxuu yahay qandaraaska iibku?
Caadi ahaan, qandaraaska noocan ah waxaa ku jira xog shaqsiyeed labada xisbi. Kadibna waxaa lagu ansixiyay xafiiska nootaayo.
Kahor saxiixa, waa inaad hubi macluumaad qiimo leh sida magaca, Aqoonsiga iyo faahfaahin kale oo waxtar yeelan kara haddii ay u hogaansami weydo. Ficilka saxiixa waa mid waajib ah. Taasi waa, labada dhinac inay sharci ahaan mas'uul ka yihiin u hoggaansanaanta waxa ku xusan heshiiska.
Xogta kale ee muhiimka ah waa qiimaha iyo sharaxaadda gaarka ah ee wanaagga la isweydaarsado.
Noocyada khayaanada qaarkood
Qeybta guryaha, waxaad inta badan arkeysaa iibinta laba jibaaran ee guryaha, iyo xitaa in loogu talagalay in lagu iibiyo qof kale hantidiisa. Mawduuc kale oo aad u soo noqnoqday ayaa ah qarinta amaahda, kaas oo si ula kac ah u dhaawici kara iibsadayaasha.
Kireysiga sidoo kale wuxuu leeyahay khatar. Kuwaas waxaa ka mid ah sawirro marin habaabin ah, dib u soo celin la'aanta dhigaalka, khataraha hore loogu soo oogay, iwm
Internetka mararka qaar waxaa ka dhaca in guri la bixiyo ka dib markii heshiiska la xiro hantida waa ka duwan tahay. Xusuusnow taas sawirro marin habaabin ah ayaa ah nooc khayaano ah oo waxyeelloobaya macaamilka.
Ilaha Sawirka: Maaliyad Shakhsiyeed / Maalgashiga guryaha ee Hispania
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tilmaamaha lagu galayo qandaraaska iibka
Tani waa aruurinta gaarka ah ee Tom Ford ee Mr Porter
Shan siyaabood oo xafiisyada loogu dhex daro buluug buluug ah